अभिलेख - शक्तिशाली र समृद्ध देश बनाउन सक्ने पृथ्वीनारायण शाहका ३९ वटा नीतिहरु - page 2
शक्तिशाली र समृद्ध देश बनाउन सक्ने पृथ्वीनारायण शाहका ३९ वटा नीतिहरु
काठमाडौं । पृथ्वीनारायण शाहका दिव्योपदेशहरुका बारेमा थोरै मात्र प्रचारप्रसार भएको छ । दिव्योपदेशप्रति चासो राख्नेहरुले पनि यसको वास्तविक अर्थ नबुझन् सकिरहेका छैनन् । कतै पारसी भाषा र नेपाली भाषाको आदि स्वरुपका शव्दहरुको अधिकका कारण नयाँ पुस्तामा दिव्योपदेशका बारेमा यथार्थ ज्ञानको सञ्चार हुन सकिरहेको छैन । यसै परिप्रेक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहका दिव्योपदेशहरुलाई व्यष्टि व्यष्टिमा प्रस्तुत गरिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । वर्ष सन् २०१८ मा पनि अमेरिकाको चर्चा र भूमिका धेरै देखियो भने अन्य देशका विभिन्न घटनाहरु पनि विश्वव्यापी भए । वर्षभरीका चर्चित मुख्य घटनाक्रमहरुको सूचीमा राजनीतिक घटनाहरु नै धेरै भएका छन् । त्यस बाहेक हिंसात्मक, आपराधिक तथा अन्य विभिन्न घटनाहरु पनि चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल भएका छन् । यस बर्षका मुख्य केही घटनाहरुको यहाँ संक्षेपमा स्मरण गरिएको छ । १.इन्डोनेसियामा दुई हजारको ज्यान लिने भूकम्प यस बर्षको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो विनासकारी घटनाको रुपमा इन्डोनेसियाको भूकम्पलाई लिन सकिन्छ । सेप्टेम्बर २८ तारिखका दिन आएको ७ ।	थप पढ्नुहोस्
कांग्रेस महासमितिका ६० प्रतिशत सदस्य हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा र १५ प्रतिशत तटस्थ ♠ नेपालबहस टिप्पणी ♠ कपट नं. १ : हाल प्रचलित संविधानमा समावेश गर्न भनी देशका विभिन्न स्थानबाट संविधानसभाको सभासद टोलीले बटुलेका करिब २ लाख जनमत र सुझाबमध्ये अधिकांश जनताले ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्ने शब्द हटाउन र हिन्दू, बौद्ध, किँरात, शिख, जैन आदि धर्मावलम्बीका निष्ठा र आस्थाको कदर हुने उपयुक्त शब्द राख्ने माग गरेका थिए । तर ती सबै सुझाबहरू रहस्यमय तरिकाले गायब बनाएर आफुखुशी संविधान बनाइयो । संविधानका प्रत्येक धाराउपर दफावार छलफल हुनुपर्नेमा ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट संविधान जारी गरियो ।	थप पढ्नुहोस्
शीर्ष नेताहरू सीआईएको जालमा परिसकेको कार्यकर्ताहरूको आरोप कुसुम विश्वकर्मा / नेपालबहस डेक्स ने.क.पा. का सहअध्यक्ष प्रचण्डलाई अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले फेरि थाङ्नामा सुताइदिए । २९ मंसिरका दिन सार्वजनिक रुपमा प्रचण्डले घोषणा गरेका थिए, “अब केही दिनभित्रैमा हाम्रो पार्टीको पोलिटब्युरो गठन हुने पार्टी सचिवालयमा निर्णय भइसकेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
सन्दर्भ : कांग्रेस महासमिति बैठक :- बीपीबाट कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूका नाममा प्रेषित कालजयी –पत्र (२०१५) नेताहरुको चरित्र र सामन्ती व्यवहारकै कारण आज इतिहासको संगीनमोडमा पुगेको कांग्रेसको चिरप्रतिक्षित महासमिति बैठक शुरु भएको छ । कम्युनिष्टहरुले दुईतिहाई बहुमतको सरकार गठन गर्दा सबैभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक पार्टी कांग्रेस आज दुरुह प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको छ । बीपी विचार त्यागेर कांग्रेस नेतृत्वले आफ्नो वैचारिक धरातल बिर्सेको आरोप कार्यकर्ता पंङ्तिबाटै लाग्ने गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
नेपालबहस टिप्पणी काठमाडौं । निजी क्षेत्रका मानिसहरु यही वातावरण कायम रहने हो भने नेपालमा व्यावसाय गर्नु असंभव झै हुने बताइरहेका बेला विश्व बैंकले हालै प्रकाशित गरेको डुईङ्ग बिजनेश प्रतिबेदन प्रतिवेदनले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण खस्कदै गएको जनाएको छ । विश्व बैकंको डुईङ्ग बिजनेश प्रतिबेदन ( ब्यवसाय गर्ने वातावरण ) मा नेपाल १०५ स्थानबाट ११० मा झरेछ। भारत ३० स्थान माथि उक्लेर ७७ मा पुगेछ। चीन,भुटान,श्रीलकां हामीभन्दा धेरै माथि छन। एघारवटा क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनलाई आधार मानी विश्व बैंक सो निष्कर्षमा पुगेको हो ।	थप पढ्नुहोस्
कुसुम बिश्वकर्मा / नेपालबहस टिप्पणी एकनासले संघीय राज्य संरचनाको विरोध गर्दै आएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर के.सी.का विरोधपूर्ण अभिव्यक्तिको वजन बढ्दै गएको छ । संघीयताप्रति आमवितृष्णासँगै उनका विचारको सान्दर्भिकता र औचित्य बढेको हो । उनी आफ्ना भाषणलाई उखानटुक्काले सिँगार्छन् । उनले प्रयोग गरेका केही चर्चित उखान टुक्का :- १. यो संघीयता भन्ने कुरो नेपाललाई टुक्राटुक्रा बनाएर निल्न ल्याएको षड्यन्त्र हो ।	थप पढ्नुहोस्
भद्रपुर । झापाको किचकबध महाभारतकालीन कथासँग जोडिएको तर, प्रचारका दृष्टिले ओझेलमा परेको नेपालको महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल हो । चन्द्रगढी विमानस्थलबाट १० किलोमिटर दक्षिण भद्रपुर नगरपालिका वडा नं २ मा १० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यस क्षेत्रमा दुई हजार वर्ष भन्दा पहिलेको दरबार, किल्ला, पर्खाल, भाँडाकुँडा र इँटाहरु पुरातत्व विभागको उत्खननबाट फेला परिसकेको छ । विसं २०५९ मा पहिलोपल्ट उत्खनन गर्दा स्वस्तिक चिह्न भएको माटाको इँटाहरु किचकबध स्थलमा फेला परेपछि पुरातत्वविद्हरुले यसलाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिएका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको नेकपाको आयोजनामा आज बृहत्त चियापानको आयोजना भईरहेको छ । बडा दशैं, तिहार र छठ पर्वको अवसरमा भृकुटीमण्डपमा आयोजित चियापानमा ५० हजार भन्दा बढीको सहभागिता पनि जुरेको छ । राष्ट्रवादको नारा र सस्ता कुरा गरेर चर्चित भएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यतिबेला भने अलोकप्रियताको शिखरमा छन् । नेपालको ४० औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएको पनि ७ महिना भएको छ । नयाँ संविधानपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री । यो अवधिमा उनी आफ्नै कारणले सबैभन्दा बढी आलोचित भएका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । विभिन्न क्षेत्रबाट हराएका बालबालिका भेटिनेक्रम धेरै कम देखिएको छ । उनीहरुलाई घरेलु काममा प्रयोग गर्ने गरेकाले भेटिनेक्रम न्यून देखिएको हो । कतिपय अवस्थामा भेटिएका बालबालिकाको विवरण अभिभावकले पनि दिँदैनन् । चालू आर्थिक वर्षको तीन महीनामा हराएका बालबालिकामध्ये ३६ प्रतिशत मात्रै फेला परे । चौसट्ठी प्रतिशतको अवस्था अज्ञात नै छ । गएको वर्ष हराएकामध्ये ६० प्रतिशत बालबालिका अझै बेखबर छन् ।	थप पढ्नुहोस्